DOSBox ichiri mupenyu uye iri kuvandudzwa zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Iyo purojekiti DOSBox inonakidza emulator yeiyo MS-DOS inoshanda sisitimu iyo yatinogona kuisa paLinux kuti tikwanise kumhanyisa klassiki mitambo yemavhidhiyo nemapurogiramu echizvarwa kubva kune ino yekare Microsoft system. Chokwadi iwe unotozviziva, nazvo unogona kumutsa yakawanda yakawanda yekare software uye zviri nyore kwazvo kushandisa. Muchokwadi, isu takatopa zvimwe zvinyorwa muLxA zvichitsanangura mashandiro azvo, nezvimwe.
Munguva dzekupedzisira, chirongwa ichi chakaratidzika kunge chakafa. Asi chokwadi ndechekuti hazvisi. Yakagadziridzwa zvakare neguhu rakagadziriswa. Ichokwadi ndechekuti inoshanda mushe manje, asi hazvina kushata kuti inoramba ichikwenenzverwa. Unogona kushanyira iyo zviri pamutemo webhusaiti DOSBox kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo projekiti, zvinyorwa uye kurodha yazvino vhezheni yeiyi emulator kana uchiida. Iyo vhezheni ndeye DOSBox 0.74 uye iyo yekuvandudza ine chekuita nekuchengetedza ...
DOSBox ichiri kurarama uye shanduko dzakawedzerwa Ndizvo:
Yakagadzirisa nyaya yaive yavapo kwenguva yakareba. Ichi chirwere chakakonzera buffer kufashukira uye zvakakanganisa chengetedzo. Unogona kuona rumwe ruzivo nekutsvaga iyo kodhi CVE-2019-7165 (naAlexandre Bartel) neiyi njodzi yakatarwa.
Uye zvakare, yekutanga mvumo system yakawedzerwa kuitira kuti zvirongwa zvinomhanya mukati meDOSBox zvisakwanise tsvaga zvirimo mu / proc, uye izvi zvakare zvine chekuita nekuchengeteka. Iyo kushushikana kwakaratidzirwa seCVE-2019-12594, yakawanikwa zvakare naAlexandre Bartel.
vamwe netsikidzi Maporesi ayo akanganisawo chengetedzo agadziriswa.
Uye zvakare yakagadzirisa dzimwe nyaya dzine chekuita nekupa ne OpenGL.
Ikozvino, iyo nyowani DOSBox 074-2 vhezheni yakachengeteka zvakanyanya, kunyangwe pasina misiyano maererano nemabasa matsva kana kumwe kugadziridzwa. Pamusoro pezvo, timu yekusimudzira inoramba ichishanda iyo itsva vhezheni DOSBox 0.75 izvo isu tichaona munguva pfupi uye izvo zvichaunzawo kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » DOSBox ichiri mupenyu uye inogadziriswazve
Iyo itsva vhezheni iri 0.74-3, -2 yakaburitswa muna Nyamavhuvhu 2018.
Pindura kune rima_king